Football Khabar » सेनेगललाई हराउँदै अल्जेरिया बन्यो अफ्रिका कपको च्याम्पियन
सेनेगललाई हराउँदै अल्जेरिया बन्यो अफ्रिका कपको च्याम्पियन
काठमाडौं, साउन ४
पहिलोपटक उपाधि जितेर इतिहास रच्ने दौडमा रहेको सेनेगललाई हराउँदै अल्जेरिया अफ्रिका कप अफ् नेसन्स फुटबलको च्याम्पियन बनेको छ । गत राति भएको फाइनल खेलमा अल्जेरियाले साडियो मानेको टिम सेनेगललाई १–० ले हराउँदै उपाधि चुमेको हो ।
यससँगै अल्जेरिया दोस्रोपटक अफ्रिका कपको च्याम्पियन बनेको छ । यसअघि उसले सन् १९८० मा पनि अफ्रिका कप जितेको थियो । यता, सेनेगल भने दोस्रोपटक फाइनल पुगेर पनि उपाधि जित्नबाट चुक्यो ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अल्जेरियाले खेलको दोस्रो मिनेटमा गरेको एक मात्रै गोल उपाधि जित्न निर्णायक भयो । खेल सुरु भएको दोस्रो मिनेटमै बागदाद बोउनेदाको प्रहार सेनेगेलका सालिफ सानेलाई लाग्दै गोल भएको थियो । सो गोलमा सेनेगलका गोलकिपरले रोक्ने कुनै मौकै पाएनन् ।
त्यसपछि पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा पनि दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि खेल अल्जेरियाले १–० ले जित्यो । निकै घम्साघम्सीपूर्ण खेलमा अल्जेरियाले विपक्षीको पोस्टमा जम्मा एकपकट मात्रै आक्रमण गर्न सक्यो । सोही आक्रमणमा गोल निकालेको उसले अन्ततः उपाधि पनि जित्यो । गोल खाएपछि गोल फर्काउन लगातार प्रयास गरेको सेनेगलले गोल निकाल्न सकेन । र, उपाधि अल्जेरियालाई सुम्पियो ।
सेनेगलले दोस्रो हाफमा पेनाल्टी पाएको थियो । मैदानका रेफ्रीले पेनाल्टी दिए पनि पछि भिएआरको टिमले सो पेनाल्टी रद्द गरिदिँदा सेनेगललाई ठूलो झट्का लागेको थियो ।
प्रकाशित मिति ४ श्रावण २०७६, शनिबार ०२:५०
सेभिल्लाविरुद्ध मेस्सी ‘रातो कार्ड खानबाट’ कसरी जोगिए ?
युभेन्टसलाई कोपाको फाइनल पुर्‍याएपछि पिर्लोले गरे रोनाल्डोको प्रशंसा
सेभिल्लासँग पहिलो लेग २–० ले हारे पनि कोम्यानलाई नो प्रोब्लेम : खेलपछि के–के भने ?
कोपा इटालियाको उपाधिका लागि युभेन्टस र एटलान्टा भिड्ने
आज फिफा क्लब विश्वकपको उपाधिका लागि बार्यन र टिग्रेस भिड्दै
‘चोट, ओ मेरो साथी’ : बार्सिलोनासँगको खेलका मुखमा नेइमार घाइते
फ्रेन्च कप : दोस्रो डिभिजनको टिममाथि पिएसजीको साँघुरो जित
९ गोलको वर्षा भएको खेलमा एभर्टनले टोटनह्यामलाई एफए कपबाट आउट गरायो
कोपा डेल रे सेमिफाइनल : सेभिल्लाले बार्सिलोनालाई चखायो नमिठो हार
नापोलीलाई हराउँदै एटलान्टा कोपा इटालियाको फाइनलमा